Ahoana ny fiasan'ny Parallax an'ny iOS 7? Vaovao IPhone
Ahoana ny fiasan'ny Parallax an'ny iOS 7
Iray amin'ireo fiovan'ny hatsarana maro io iOS 7. Tsy manome fampiasana azo ampiharina, hatsarana fotsiny izany, fa ny vokatra "Parallax" izay manome ny halalin'ny efijery iPhone dia liana te-hilaza ny kely indrindra, ary gaga izay rehetra mbola tsy nahita an'io. Ahoana no ahaizan'i Apple manahafana an'io vokatra telo-refy io? MacWorld dia nanazava izany tamin'ny teny mora azo mora foana, ary tiako hizara azy aminao eto.
Amin'ny lafiny iray, Apple dia mampiasa ny vokany hita maso, izay akaiky kokoa ny fijery dia toa lehibe kokoa ary mandeha haingana kokoa noho ny lavitra, kely kokoa sy miadana kokoa mihetsika. Mba hahatakarana azy dia mila mieritreritra fotsiny ianao fa mitondra fiara sy mijery eo am-baravarankely izahay. Izay akaiky dia mihetsika haingana kokoa noho izay ananantsika lavitra lavitra ny masontsika, raha ny tena izy dia mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mitovy daholo ny zava-drehetra. Avy eo dia misy ny sensor an'ny fitaovana iOS: Gyroscope sy Accelerometer. Ny fitambaran'ny sensor roa dia mamela ny rindrambaiko noforonin'i Apple hamaritra amin'ny fotoana rehetra ny toerana misy ny fitaovana sy ny fihetsik'izy ireo, ao anatin'izany ny fivezivezena mihodina.
Inona no ataon'i Apple? Raha lazaina amin'ny ankapobeny, azontsika atao ny mampihena izany mamorona fiaramanidina roa samy hafa: ny sary masina etsy an-daniny ary ny temotra amin'ny lafiny iray. Amin'ny fihodinana ilay fitaovana dia mifindra fiaramanidina iray amin'ny iray hafa izy, ary mamokatra ilay effets "3D" izay manome ny halalin'ny efijen'ilay fitaovana. Ny zava-drehetra dia manondro fa ny iOS dia tsy mampiasa loharano be loatra amin'izany, ary noho izany dia tsy misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovana na bateria amin'ny fomba lehibe izany. Na ireo mpandrindra fampiharana aza dia afaka mampiasa an'io vokatra io hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana azy. Ohatra, ny lalao sasany dia afaka manararaotra izany mba hahatonga azy ireo ho "telo-telo". Na dia manizingizina aza aho fa vokatra tsotra hita maso io dia ho hitantsika ny faharetan'ny fotoana hisehoana amin'ireo rafitra fiasa hafa.
Fanazavana fanampiny - Ity no iOS 7 Beta 2 amin'ny iPad
Loharano - MacWorld
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fiasan'ny Parallax an'ny iOS 7
Ho hita eo amin'ny iPad 2 ve izany?
Izay raha ny hevitro.
maty aho dia hoy izy:
Eny, inona no fahitana an'i Apple sy ny anao. Azon'izy ireo ampiasaina izany ny lalao video mandeha ary lazao. Raha parallax no nampiasaina tamin'ny lalao video hatramin'ny Super Mario bros 3. Andriamanitra ô, inona no hovakina
Mamaly an'i morri
Azonao atao ve ny milaza amiko momba ny fitaovana finday (smartphone na tablette) izay mampiasa io effet io? Tsy miresaka fiaramanidina samihafa fotsiny aho fa miresaka momba ny fihodinana ilay fitaovana manana izany vokatra izany.
Nolazaiko izany mba hahafahanao mampita izany amin'ny Macworld, izay olona tsy nahita fianarana mahantra izay tsy mahalala na inona na inona momba an'io, satria azoko avy tao ilay lahatsoratra. Alao ny lalana ho an'ireo mpankafy mahantra izay manana bilaogy izay tsy misy afa-tsy amin'ireo 5000 be mpitsidika indrindra eto an-tany.
Nalefa tamin'ny iPhone-ko
Amin'izay, eny, nangina aho. Ny fahatsapana nomeny ahy rehefa namaky azy io dia toy ny nahitan'i Apple ny vokatry ny paralaks ary zava-baovao izy io. Izany hoe, nametraka effets fanta-daza fotsiny ianao ary nanampy ny gimik ny fampiasana ny accelerometer ho azy.
Foyonero dia hoy izy:
Ny fahatsapana "holographic" hitanao amin'ny horonantsary You Tube izay navoakanao dia tsy tena marina amin'ny zava-misy. Heveriko fa androany miaraka amin'ny (beta4) dia tsy maintsy mbola mivoatra tanteraka ny vokany, saingy tena tsy "tsara" toy ny tamin'ny horonantsary naroson'izy ireo. Ao amin'ny Iphone 5 vaovao sy madio miaraka amin'ny ios7B4 dia mihitsoka kely ny vokany izay mahatonga azy io tsy ho vokany tsara ho amin'ny vokatra manelingelina sy tsy misy ilana azy. Etsy ankilany, mino manokana aho fa tsy manome na inona na inona izany.
Valiny tamin'i Foyonero
iydomngz dia hoy izy:
Ouhh !! Tsara loatra ity lahatsoratra ity
Valio i iydomngz
Merial dia hoy izy:
fa ity kosa ho an'ny iPhone 4? raha toy izao no mampavitrika azy?
Mamaly an'i Merial
ICloud Keychain: ampifanarohy amin'ny alàlan'ny fitaovana ny teny miafinao
Snapchat, "boom" farany an'ny App Store